Germalka oo Cadeeyay Caqabadaha hortaagan Tarxiilka Qaxootiga Suuriyaanka Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka CaalamkaGermalka oo Cadeeyay Caqabadaha hortaagan Tarxiilka Qaxootiga Suuriyaanka
Germalka oo Cadeeyay Caqabadaha hortaagan Tarxiilka Qaxootiga Suuriyaanka
January 23, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska 0
Sarkaal Jarmal ah ayaa xaqiijiyay caqabado hortaagan in la masaafuriyo Qaxootiga Suuriyaanka. Wuxuu sharraxay in shuruudo badan ay tahay in marka hore la buuxiyo si loo fuliyo go’aankan masaafurinta sida in la buuxiyo sharuudaha tarxiilka iyo qofka la tarxiilayo kiis isaga gooni u ah.
Madaxa cusub ee Shirarka u qaabilsan Wasiirada Arimaha Gudaha Jarmalka, Thomas Strobel, wuxuu arkaa carqalado waa weyn oo ku saabsan dib u celinta qoxootiga la diiday ee Syria xitaa ka dib markii Jarmalku joojiyay xayiraadii balaaran ee masaafurinta ee wadanka oo ay ragaadiyeen dagaalo mudo toban sano ah.
“Kuwa lagu sifeeyay inay yihiin kuwo khatar ku ah amniga dalkeena kuma sii tiirsanaan karaan mamnuuca masaafurinta,” ayuu wasiirka arimaha gudaha ee gobolka Baden-Wuerttemberg ku sheegay hadal uu siiyay wakaalada wararka Jarmalka ee Stuttgart, isagoo sharxayay taas, dhinaca kale waxa uu sheegay shuruudo badan waa in marka hore la buuxiyo, “si kiisaska shaqsiyadeed loo tarxiilo.” Siiriya “.
Mamnuucida in loo musaafuriyo Siiriya, oo dhaqan galay ilaa iyo 2012, waxay dhacday dhamaadka sanadka 2020, kadib markii isbahaysiga Masiixiyiinta, ee ay ka tirsanayd Chancellor Angela Merkel, loo jiheeyey jihadaas.
Strobel wuxuu sheegay inay jiri doonto faa’iido amni oo muhiim u ah gobolka iyo guud ahaan Jarmalka haddii shakhsiyaadka amniga qatarta u leh loo musaafuriyo Suuriya.
Sida laga soo xigtay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Federaalka, waxaa jira 89 Islaamiyiin Suuriyaan ah oo lagu tilmaamay inay yihiin kuwo khatar ku ah amniga Jarmalka. Kuwa khatarta ku ah amniga waa dad aysan ka reebin laamaha amniga ee Jarmalka inay galaan dambiyo culus oo salka ku haya arrimo siyaasadeed.
Strobel wuxuu tilmaamay inay jirto shuruud kale oo ah in loo musaafuriyo Syria, taas oo ah baahida loo qabo in dib loo eego lana ilaaliyo Axdiga Yurub ee Xuquuqda Aadanaha kiis kasta goonidiisa, wuxuuna yidhi: “Saddexaad, waa inay ficil ahaan suurtogal noqotaa in qof lagu celiyo,” iyagoo sharxaya inay taasi macnaheedu tahay inay jiraan goobo ammaan ah Suuriya waxaa loo tarxiili karaa Qaxooti.
Qiimeynta Wasaaradda Arrimaha Dibadda Jarmalka ee xaaladda halkaas ka jirta ayaa door muhiim ah leh. Qiimeyntii ugu dambeysay ee ay sameysay wasaaradda ayaa lagu sheegay in “xadgudubyada waaweyn ee xuquuqda aadanaha ee ay geystaan ​​dad kala duwan” ay weli ka sii socdaan guud ahaan Suuriya Strobel ayaa yidhi “Waqtiyadu way is badalayaan, xaalada dhulka ee Siiriya sidoo kale way isbadali kartaa”.